ဘ၀နှင့်အချစ် Archives - Myitter
ကန်စွန်းရွက်သွားခူးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ဦး ပြန်မလာလို့လိုက်ရှာရာမှ စိတ်မကောင်းစရာ …
February 15, 2020 Myitter 0
ကန်စွန်းရွက်သွားခူးတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ဦး ပြန်မလာလို့လိုက်ရှာရာမှ စိတ်မကောင်းစရာ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၄) AlinnMyay(အလင်းမြေ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃ ရက် ည၈နာရီ၅ဝမိနစ်အချိန်ကရေနစ်သေဆုံးနေသည့် အမျိုးသမီး(၁)ဦးနှင့် ကလေးငယ်(၁)ဦးရောက်ရှိနေကြောင်း မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ သောင်းဒန်ဦးမှ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာသဖြင့် စခမ ဒုရဲမှူး ဌေးဝင်းနှင့်အဖွဲ့သည် သက်သေ များနှင့်အတူ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်း […]
တစ်ယောက်ကို တစ်ထောင်ကျပ်နဲ့ ဦးခေါင်းကင်ဆာသည် ကလေးငယ်လေးရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်လိုက်ကြရအောင်လား …
ဆေးထပ်ကုဖို့ပိုက်ဆံလိုငွေ သိန်း (၁၅၀၀) ထပ်လိုနေပါတယ် ၊ ပထမ အလှူခံရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀) ကကုန်တော့မှာပါ။ ဖခင်မှာစီမံဘဏ္ဌာဝန်ကြီးရုံး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လစာ – 312000 ဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိမှာ ပထမ လှူဒါန်း‌ရရှိငွေ သိန်း (၁၀၀၀)ဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံ Samitivej children’s hospital မှာတက်ရောက်ကုသနေပါတယ် […]
ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးမှာ မနက်တိုင်း ၁၇နစ်တိုင်တိုင် နေ့စဉ်မပြတ် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးလာခဲ့ပါတယ်…
၁၇နှစ်တိုင် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးလာသူ အသက်၆၇နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအေးချိုဟာ မနက်တိုင်း ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးမှာ ၁၇နစ်တိုင်တိုင် နေ့စဉ်မပြတ် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာကျွေးလာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေနားကို ကပ်ခဲလှတဲ့ ကျီးကန်းတွေ၊ ကြွက်ကလေးတွေဟာ ဦအေးချိုကုို မနက်တုိုင်း မျှော်နေတတ်ကြပြီး ငှက်ကလေးကြွက်ကလေးတွေကုို အစာကျွေးတဲ့အခါတဦးက စေတနာ …. တစ်ဦးက […]
ချစ်သူများနေ့ (သို့) ထူးခြားသော အလှူရှင်မိသားစု ၏အလှူဒါန ….
ကျနော်ကတော့ ချစ်သူဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေပဲလို့ခံယူထားတယ် …။ ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုကန်တော့တာ ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုကန်တော့တာ လက်ဆောင်ပေးတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာ စတဲ့အရာတွေကလည်း ချစ်သူများနေ့မှာ လုပ်လို့ရတယ် လုပ်လည်းလုပ်ကြပါတယ် …။ ပေးသူ ယူသူနှစ်ဦးစလုံးဟာ အပြုံးမျက်နှာတွေနဲ့ လှပနေကြမယ်ဆိုရင် နေ့ရက်တိုင်းအားလုံးဟာ ချစ်သူများနေ့ပါပဲ …။ ခရီးသွားရင်း နိုင်ငံ့တာဝန်ကို အသက်ပေးပြီး ကာကွယ်နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို […]
ကျောက်မြောင်းတစ်ဝိုက်နားမှာနေတဲ့ လူတွေကို ၁ခုလောက် အကူအညီတောင်း ချင်လို့ပါ …
ကျောက်မြောင်းတစ်ဝိုက်နားမှာနေတဲ့ လူတွေကို ၁ခုလောက် အကူအညီတောင်း ချင်လို့ပါ ကျောက်မြောင်းစတိုးနဲ့ KBZ Bank ရဲ့ လမ်းကြားထဲမှာ ဖရဲသီးရောင်းတဲ့ အဖွားနဲ့ တောင်းတဲ့အဘွားက နေ့တိုင်းနီးပါးရှိပါတယ် သူတို့၂ယောက်လုံးက မရှိဘူးဆိုရင်တောင် အသက် ၈၀တော့ကျော်နေပါပီ ဖရဲသီးရောင်းတဲ့အဘွားကသန်လျင်ကလာရောင်းတာပါအဘွားမှာ မြေး၅ယောက်ရှိတယ် သမီးအိမ်မှာကပ်နေတာမို့လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာစားနေတာပါ သူက အဲ့မြေးလေးတွေကိုလည်း […]
အဖွား နာမည်က ဒေါ်တင်တင်လှ တဲ့…ရဲမှူးကတော်ကြီးပေါ့…ကတော်ပီပီ ရုပ်ချော အပြောကောင်း ပေါင်းတတ်သင်းတတ်… ပြည်မြို့လယ်မှာ တိုက်ကြီး နှစ်လုံးတောင် ပိုင်တာရယ်…. သားသမီးမထွန်းကားခဲ့တော့ အဖွားအမျိုးသား ရဲမှူးကြီးဆုံးတော့ အဖွားက တူတွေ၊ တူမတွေနဲ့နေတာရယ်… ဒီလိုနဲ့ အဖွား ချော်လဲ ပေါင်ကျိုးတော့ အဖွားရဲ့ တူတွေ တူမတွေက အဖွားကို […]
February 13, 2020 Myitter 0
ညီမလေး ……. ခဏတာ သာယာမှု အတွက် တစ်ဘဝစာ ထိမ်းသိမ်း လာတဲ့ အပျိုစင် ဘဝကို ချောကလက်နဲ့ လဲမစား လိုက်နဲ့နော် ။ အပျိုစင် ဆိုတာ အလွယ်တကူ တိုင်းတာလို့ ရတဲ့ ကိရိယာ မရှိဘူး ဆိုပေမယ့် တစ်ဘဝစာ တော့ လိပ်ပြာလုံ […]
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပြီ
February 12, 2020 Myitter 0
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပြီ ချစ်သူရည်းစားနဲ့ Living Together ကိစ္စ ချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together ) လင်မယားလို […]